Madaxweynaha Mareykanka oo Kenya ugu baaqay in doorasho nabad ah ay ka dhacdo – The Voice of Northeastern Kenya
Madaxweynaha Mareykanka oo Kenya ugu baaqay in doorasho nabad ah ay ka dhacdo
Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa ka dhawaajiyay muhiimada ay leedahay in doorasho nabad, xor iyo cadaalad ah ay ka dhacdo dalkan Kenya xiliga la qabanayo doorashada guud ee lagu wada in sanadka soo socdo ay dalka ka dhacdo.
Aqalka madaxtooyada ee dalka looga arrimiyo ayaa shaaca ka qaaday in shalay oo isniin ahayd Barack Obama iyo Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ay kuwada hadleen qadka telefoonka iyagoo ka wada hadlay arrimo dhowr ah oo labada dal khuseeya.
Obama ayaa u sheegay Madaxweynaha dalka in uu ka shaqeeyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho xasiloon islamarkaana laga feejignaado in aysan dhicin doorasho muran hareeya sida tii dalka laga qabtay sanadkii 2007-dii.
Wadahadalkaasi ayaa waxa lagu sheegay in xukuumadda Washington ay dooneyso in ay sii wado islamarkaana sii xojiso saaxibtinimada ka dhaxeysa laba dowladood gaar ahaan in mareykanka uu sii wadi doono tageerida dhanka amniga ah ee uu siiyo Dowlada dalka.
Sidoo kale arrimaha kale ee Barack Obama uu u sheegay Uhuru Kenyatta ayaa waxa kamid ah in Mareykanka uu taagero dhanka raritaanka qaxootiga uu siin doono xukuumada Nairobi si qaxootiga ku dhaqan xeryaha dhadhaab dib loogu celiyo dalkooda taas oo ka dambeysay kadib markii Kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha dunida ugu weyn ee dhadhaab albaabada loo laabi doono.
Labadan madaxweyne ayaa waxay sidoo kale isla soo qaaden in xoga la saaro heshiiskii isbadalka cimilada ee magaalada Paris si loo yareeyo wasakhaynta hawada waxna laga qabto isbedelka cimilada.
Mareykanka iyo Kenya ayaa waxa ka dhexeeya xiriir saaxibtinimo oo soo jireen ahaa iyadoo Madaxweynaha Mareykanka oo sanadkii hore ee 2015-kii Kenya u balan qaaday in uu taagero dhinac walbo ah siin doono taas oo daba socotay kadib markii uu booqasha ku yimaaday dalka Madaxweynaha mareykanka.
← Dhaqaatiirta Nyeri oo dib ugu labtay shaqadoda
Ninkii ka dambeeyay Qaraxyadii New York oo la soo qabtay →